Home / Busy is the New Stupid
“Being busy & being productive are two different things.” လို့ဆိုကြသလိုပါပဲ။ အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာဟာ လုံး၀ ကွဲပြားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်လေ့ရှိတာက ကျွန်တော်တို့ အများစု အမြင်မှာပေါ့။ လူတစ်ယောက်က အလုပ်တွေ အရမ်းရှုပ်တဲ့ ပုံစံပေါက်နေရင် ဒီလူက အလုပ်တွေ အရမ်းလုပ်တယ်၊ အရမ်းကြိုးစားတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်။ ဘာတွေ ဘယ်လိုပဲ လုပ်နေပါစေဦးတော့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ထဲမှာ Impressive ဖြစ်သွားတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာ အကျင့်ဆိုးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
ကဲ …. ဒီလို ကြားတော့ လူတွေက ပြန်ပြောကြမှာပေါ့။
“ဟာ .. ဒါဆို အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေက အလုပ်မလုပ်ကြတဲ့သူတွေလား၊ အလုပ်မကြိုးစားဘဲ အောင်မြင်လာတာလား” ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ဒီလိုတော့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ အောင်မြင်သူတွေ အလုပ်ကြိုးစားကြတာ၊ အလုပ်များကြတာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက ကျွန်တော်တို့ မြင်နေ တွေ့နေ ကြုံနေရသလို အလုပ်ရှုပ်နေကြတာမျိုး မဟုတ်တာတော့ သေချာသလောက်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်က အလုပ်တွေရှုပ်တာဟာ မကောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အလုပ်တွေရှုပ်နေရင်းကြားကပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း အလုပ်တွေ ရှုပ်နေရင်းကြားကနေပဲ ဖတ်ပေးကြည့်ကြပါဦးဗျ။
ဆိုတော့ ခုနက စကားကို ပြန်ဆက်ရရင် တိုးတက် အောင်မြင်နေတဲ့ လူတွေက အလုပ်မရှုပ်ကြဘူးလားပေါ့။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ သတိထားရမှာက နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွေမှာပေါ့ဗျာ၊ ဒီလို လူတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေများစွာထဲက တစ်ခုက အများနဲ့မတူအောင် Time Management ကောင်းကြပါတယ်။ တစ်နေ့တာ တစ်ပတ်စာမှ စပြီး လိုအပ်တဲ့အရာတွေအတွက် ပေးရမယ့် အချိန်ကို ကောင်းမွန်စွာစီမံနိုင်ကြတယ်။ အလုပ်ဘယ်လောက်များများ သူတို့အတွက် တကယ်အရေးကြီးတဲ့၊ အရေးပါတဲ့အရာတွေအတွက်ဆို အချိန်ရအောင်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ အလုပ်ရှုပ်လိုက်တာဆိုပြီး အော်နေကြတာဟာ Time Management လုပ်ရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ ၂၄ နာရီရှိတာချင်းအတူတူ အချိန်ကို အသုံးချတတ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အောင်မြင်သူနဲ့ သာမန်လူတွေ ကွာခြားသွားတာပါ။
အချိန်ရဲ့ ရှားပါးမှုကို သိတဲ့သူတစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်သူ အလုပ်မရှုပ်အောင် နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိစ္စတစ်ခုအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှု အပြည့်အဝမပေးနိုင်တော့လေ။ ဒီအခါမှာ အမှားတွေလုပ်မိမယ်၊ အကောင်းဆုံးရလဒ်ထွက် မလာတော့ဘူး။ Time Management ကိုသာသေချာလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ၊ ခင်ဗျားဝါသနာပါတာတွေလုပ်ဖို့၊ မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့၊ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေ သင်ယူဖို့ အချိန်ပိုတွေထွက်လာမယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ သိနိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ…. ဒါဆို ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဘာလို့ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေကြတာလဲ?
အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေက အလုပ်ရှုပ်တာထက် အရှုပ်တွေ လုပ်ပြီး အချိန်တွေ ဖြုန်းမိနေကြလို့ပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို မလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် ကိုယ့်အတွက် အရေးပါတဲ့ အရေးတကြီး လုပ်ရမယ့် အချိန်တွေကို ဖြုန်းပစ်လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား “Procrastination” ဆိုတာကြီးကို လက်ကိုင်ထားမိကြတယ်။
Deadline နီးမှ လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို နောက်ဆုံး ဘယ်အချိန် ထားပြီး ပြင်ကြရမလဲ ပြောလေ …. ဆိုတာမျိုးပေါ့။
တစ်နေ့မှာ တစ်နာရီလောက် ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေမိလိုက်တဲ့ အချိန်တွေဟာ ၂၄ ရက်အကြာမှာ “တစ်ရက် တိတိ” ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘဲ ထိုင်ဖြုန်းပစ်မိသွားပါပြီ။
ဒါဆို …. အလုပ်ရှှုပ်တော့လည်း ဘာဖြစ်လဲဗျာ ရှုပ်ပါစေပေါ့လို့ တွေးမိရင် စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ရုံးမှာ အလုပ်များပြီ၊ အလုပ်တွေ ရှုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ လုပ်ရမယ့် တာဝန်တစ်ခုကို စနစ်တကျနဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဖို့ သေချာ အချိန်မပေးနိုင်၊ မတွေးနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ပြီးပြီးရော အမြန်လုပ်လိုက်ကြတာက များပါတယ်။ အမှားတွေ လုပ်ချင်လုပ်မိလိုက်မယ်။ နောက်ဆုံး အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် ဒါဟာ သင့်ရဲ့ ၁၀၀% အကောင်းဆုံး မဟုတ်နိုင်တာ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါက အောင်မြင်တိုးတက်မယ့် လမ်းစနဲ့ အဝေးကြီးကိုရောက်စေမယ့် အကျင့်ဆိုးတစ်ခုလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒါကြောင့် အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေထက် ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတာကို သုံးသပ်ကြည့်စေချင်တယ်။
ဆိုကြပါစို့ ကိုယ့်အတွက် တကယ် ဗဟုသုတ ရစေမယ့် တိုးတက်စေမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ် ဖတ်ချင်တယ်။
ဖတ်ဖို့ အချိန်ကို မပေးနိုင်ဘူး၊ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကိုယ့် Personal Improvement အတွက် အချိန်မပေးနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်တွေက ဘာတွေလဲ?
တကယ်ပဲ စာဖတ်ဖို့ထက် ဒီရှုပ်နေတာတွေက ပိုအရေးကြီးတာလား?
ကိုယ်တိုင်ကပဲ ဘာကို ဦးစားပေးရမလဲ မသိတာလား?
ဒါမှမဟုတ် ခင်ဗျား ဖတ်ရမယ့် စာအုပ်က ဒီ ရှု့ပ်နေတာတွေကို ပစ်ထားပြီး ဖတ်ရလောက်အောင် အရေးမကြီးလို့လား?
ကိုယ်တိုင် ဘာကိုမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း စဉ်းစားမဆုံးဖြတ်ဘဲ ဟာ… ငါ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်လို့ ပြောနေ လုပ်နေတာထက် စာရင် Time Management ကောင်းကောင်းနဲ့ ဘာတွေ ဘယ်လို ရှုပ်နေလဲ ဆိုတာက စပြင်ကြည့်တာ မကောင်းဘူးလားဗျ။
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့က ဒါက ပြောတော့သာ လွယ်တာလို့ ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ မှန်ပါတယ်။
လွယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ လူမှုဝန်းကျင်ကိုက အလုပ်ရှုပ်မှ အလုပ်လုပ်တယ်ထင်တတ်ကြတာဆိုတော့။
တကယ်တမ်းကျ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် တစ်နေ့တာ အချိန်ဟာ ၂၄ နာရီပဲ ရကြတာ ချည်းပါပဲ၊ ဒါကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင် အသုံးချမလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။
အလုပ်တွေ ရှု့ပ်မနေတော့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တွေ လုပ်ကြည့်ရအောင်လားဗျာ။